आईफोन १३ र आईफोन १३ मिनि सार्वजनिक, कति पर्छ मुल्य ? – ramechhapkhabar.com
आईफोन १३ र आईफोन १३ मिनि सार्वजनिक, कति पर्छ मुल्य ?
काठमाडौं । एप्पललको आईफोन १३ सिरिज सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीले आईफोन १३, आईफोन १३ मिनि, आईफोन १३ प्रो र आईफोन १३ प्रो म्याक्स गरी ४ मोडलमा नयाँ सिरिज घोषणा गरेको हो ।
यसन्तर्गत आईफोन १३ मा ए१५ बायोनिक चिप राखिएको छ । अहिलेसम्मका सबै स्मार्टफोनको तुलनामा फास्ट सीपीयू रहेको दाबी गरिएको यो फोनमा १६ कोर न्युरल इन्जिन छ । जसले आईओएस १५ को साथमा प्रयोगकर्ताले अर्को तहको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
आईफोन १३ मा १२ मेगापिक्सेलको वाइड एंगल लेन्स र १२ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा सहित दुई ओटा क्यामेरा दिइएको छ । दुवै फोनमा फाइभजी कनेक्टिभिटीको सुविधा छ । आईफोन मिनीको मूल्य ६९९ अमेरिकी डलर र आईफोन १३ को मूल्य ७९९ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
अब क्रेडिट र प्रिपेड कार्डको सुविधा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि
नेपाल राष्ट्रबैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई पनि पनि क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८’ जारी गर्दै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई सो सुविधा दिएको हो । यस अघि क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड जारी गर्न वाणिज्य बैंकहरुले मात्र पाउँथे ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त “क” तथा राष्ट्रियस्तरका “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । तर प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्र स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।